अध्याय ७९ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
अन्धाहरू! अज्ञानीहरू! बेकम्‍मा फोहोरका थुप्रो! तिमीहरूले मेरो सामान्य मानवतालाई मेरो पूर्ण ईश्‍वरीयताबाट अलग गर्छौ! के यो म विरुद्धको पाप हो भन्‍ने तिमीहरूलाई थाहा छैन? यसको साथै, यो क्षमा दिन कठिन कुरा हो! आज तिमीहरूका बीचमा व्यावहारिक परमेश्‍वर आउनुभएको छ, तैपनि तिमीहरूलाई मेरो एउटा पक्षको—मेरो सामान्य मानवताको—बारेमा मात्र थाहा छ र पूर्ण रूपमा ईश्‍वरीय हुने मेरो त्यो पक्षलाई तिमीहरूले देखेकै छैनौ। के मेरो पिठ्यूँ पछाडि मलाई ठग्‍ने प्रयास गर्नेलाई म चिन्दिन भन्‍ने तँलाई लाग्छ? मैले तेरो आलोचना गरिरहेको छैन; मैले त तँ कुन स्तरमा सक्छस्, र तँ अन्त्यमा कसरी समाप्त हुनेछस् भनेर मात्रै हेरिरहेको छु। मैले हजार वचनहरू बोलेको छु, तै पनि तिमीहरूले धेरैभन्दा धेरै दुष्कर्म गरेका छौ। तिमीहरूले किन मलाई बारम्बार ठग्ने प्रयास गर्छौ? आफ्नो जीवन गुमाउने बारेमा होसियार बन्! यदि तैँले मेरो क्रोधलाई निश्चित स्तरसम्म क्रोधित तुल्याइस् भने, म तँलाई कुनै दया देखाउनेछैन, र तँलाई निकालिनेछ। तँ पहिले कस्तो थिइस्, तँ निष्ठावान थिइस् कि जोशिलो थिइस्, तैँले कति दौडधूप गरेको छस्, वा तैँले मेरो लागि कति अर्पण गरेको छस् त्यस कुरालाई म ध्यान दिनेछैन; म यी कुराहरूलाई पटक्‍कै हेर्नेछैन। तैँले मलाई अहिले मात्रै क्रोधित तुल्याउनुपर्छ, अनि म तँलाई अतल कुण्‍डमा फ्याँक्‍नेछु। कसले अझै मलाई ठग्ने प्रयास गर्ने आँट गर्छ? यो कुरा याद राख! अबदेखि, जब-जब म रिसाउँछु, जोसुकै होस्, म तँलाई तुरुन्तै निकालिदिनेछु, ताकि भविष्यमा कुनै समस्या नहोस्, ताकि मैले तँलाई उप्रान्त देख्‍न नपरोस्। यदि तैँले मेरो अवहेलना गरिस् भने, म तँलाई तुरुन्तै सजाय दिनेछु। के तिमीहरूले यो कुरालाई याद गर्नेछौ? तिमीहरूमध्ये जो-जो बाठो छौ तिमीहरूले तुरुन्तै पश्‍चात्ताप गर्नुपर्छ।
आज—अर्थात्, अहिले—म क्रोधित छु। तिमीहरू सबै मप्रति निष्ठावान बन्‍नुपर्छ र तेरो सम्पूर्णता मलाई सुम्पनुपर्छ। तैँले उप्रान्त कुनै ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यदि तैँले मेरा वचनहरू सुनिनस् भने, म मेरो हात फैलाउनेछु र तँलाई प्रहार गर्नेछु। यसो गरेर, म सबैलाई म को हुँ भन्‍ने देखाउनेछु; आजको दिन, म हरेकप्रति क्रोधित र प्रतापी छु (जुन मेरो न्यायभन्दा पनि गम्भीर छ)। मैले धेरै वचनहरू बोलेको छु, तैपनि तिमीहरूले प्रतिक्रिया नै दिएका छैनौ; के तिमीहरू साँच्चै यति बोधो छौ? तिमीहरू त्यस्ता छौ भन्‍ने मलाई लाग्दैन। यो कुकर्म गर्ने त तिमीहरूभित्र लुकेको त्यो पुरानो दियाबलस हो। के तिमीहरू यसलाई स्पष्ट रूपमा देख्छौ? हत्तपत्त आमूल परिवर्तन ल्याइहाल! आज, पवित्र आत्‍माको काम यो चरणसम्‍म अघि बढेको छ; के तिमीहरूले यसलाई देखेका छैनौ? मेरो नाम घर-घरमा, सबै राष्ट्रहरूमा र सबै दिशामा फैलिनेछ, र ब्रह्माण्डभरि वयस्कहरू र बच्चाहरूको मुखले एकैसाथ पुकार्नेछन्; यो एउटा ठोस सत्य हो। म अद्वितीय परमेश्‍वर स्वयम्‌ हुँ र यसको अतिरिक्त, म एक र परमेश्‍वरको एक मात्र व्यक्ति हुँ। त्यो भन्दा पनि, म, शरीरको पूर्णता, परमेश्‍वरको पूर्ण प्रकटीकरण हुँ। जसले मेरो आदर नगर्ने आँट गर्छ, जसले तिनीहरूका आँखाहरूमा प्रतिरोध प्रकट गर्ने आँट गर्छ, र जसले मेरो विरुद्धमा चुनौती दिने कुराहरू बोल्ने आँट गर्छ त्यो निश्चित रूपमा मेरो श्राप र क्रोधबाट मर्नेछ (मेरो क्रोधको कारण श्राप आउनेछ)। यसबाहेक, जो मप्रति बफादार नहुने वा जसले छोराछोरीले जस्तो आदर नगर्ने आँट गर्छ, र जसले मलाई छक्काउने कोसिस गर्छ, त्यो निश्चय मेरो घृणाको कारण मर्नेछ। मेरो धार्मिकता, प्रताप र न्याय सदासर्वदा रहिरहनेछ। सुरुमा, म प्रेमिलो र दयालु थिएँ, तर यो मेरो सम्पूर्ण ईश्‍वरत्वको स्वभाव होइन; धार्मिकता, प्रताप र न्यायले मात्र म स्वयम् पूर्ण परमेश्‍वरको स्वभाव बनेको छ। अनुग्रहको युगको अवधिमा म प्रेमिलो र दयालु थिएँ। मैले समाप्त गर्नुपर्ने कामको कारण मैले दया र कृपा धारण गरेको थिएँ; तापनि पछिबाट त्यस्ता कुराहरूको कुनै आवश्यकता परेन (र त्यस बेलादेखि यता ती कुनै पनि छैनन्)। यो सबै धार्मिकता, महिमा र न्याय हो, र यो मेरो सम्पूर्ण ईश्‍वरत्वसँग जोडिएको मेरो सामान्य मानवताको पूर्ण स्वभाव हो।
मलाई नचिन्नेहरू अतल कुण्डमा नाश हुनेछन् भने जसलाई मेरो बारेमा दृढ़ विश्वास छ तिनीहरू सदासर्वदा जीवित रहनेछन्, तिनीहरूलाई मेरो प्रेमभित्र हेरचाह र सुरक्षा प्रदान गरिनेछ। मैले एक शब्द मात्र बोल्दा, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड र पृथ्वीका अन्तिम छेउहरू काँप्छन्। को मेरो वचन सुनेर डरले काँप्दैन? कसले मप्रति बढ्ने श्रद्धालाई रोक्न सक्छ? अनि मेरा कामहरूबाट मेरो धार्मिकता र महिमाको बारेमा जान्न असक्षम को छ र! अनि मेरा कामहरूभित्र मेरो सर्वशक्तिमान्‌ता र मेरो महान्‌ता देख्न असक्षम को छ र! ज-जसले ध्यान दिँदैनन् तिनीहरू निश्चय नै मर्नेछन्। किनकि ध्यान नदिनेहरू तिनीहरू हुन् जसले मेरो विरोध गर्छन् र मलाई चिन्दैनन्; तिनीहरू प्रधानदूत हुन्, र तिनीहरू अति स्वेच्छाचारी छन्। आफैलाई जाँच्: जो स्वेच्छाचारी, स्व-धर्मी, घमन्डी र अहङ्कारी छ, त्यो निश्चय नै मेरो घृणाको पात्र हुन्छ र त्यो विनाशतिर बढ्दै गरेको हुन्छ!
अघिल्लो: अध्याय ७८
अर्को: अध्याय ८०